Moments Neshamwari 61
Copyright, 1915, neHW PERCIVAL.
Chii chinokonzera kurasikirwa kwepfungwa?
Kupererwa nendangariro imhedzisiro yeyemuviri kana yepfungwa kana yechimwe pfungwa. Icho chaicho chechikonzero chinokonzeresa kurasikirwa kweyeuko ndeye kusagadzikana munzvimbo dzenzara muuropi, kudzivirira pfungwa kuti dzisaite kuburikidza nemitsipa yavo. Semuenzaniso: Kana paine zvimwe zvinokanganisika pameso we optic nerve uye nzvimbo yekuona uye optic thalami, kuitira kuti zviite kuti zvikandirwe kunze kwekubata ne "pfungwa yekuona" kana chinhu chiripo chiri kuona, izvi hazvigone kubata kana kushandisa mashanji ayo enyama kuti zvinyorore kune chepfungwa icho chinhu chakange chakatsidzirwa pane pfungwa. Kana gadziriso yenzou yenzwi uye nerve-Center yakakanganisika, saka "pfungwa yakanzwika" haikwanisi kushanda idzi, uye nokudaro haigone kuburitsa mupfungwa mupfungwa kurira kwepamoyo kana zita rechinhu kana chiitiko icho pfungwa yekuona yakanga yatadza. kubereka, uye saka panogona kuve nekurasikirwa kwekuona kwekuyeuka, uye kurira kwakanaka nekuda kwezvikonzero zvemuviri. Izvi zvicharatidza kurasikirwa kweyemukati yekuravira nekunhuhwirira ndangariro, nekuda kwezvikonzero zvemuviri. Dzvinyiriro pamitsipa-nzvimbo, kurova mumusoro, kushungurudzika kamwe kamwe nekuda kwekudonha, kutenderera kwekutenderera, kushushikana kwekutya kubva kune zvakaitika zvisingatarisirwi, zvinogona kunge zvichikonzeresa kurasikirwa kwemuviri kwekuyeuka.
Kana chipinganidzo chemuviri kana kuremara kwenzara munzvimbo dzazvo dzabviswa kana kugadziriswa, kwaingova nekurasikirwa kwechinguva kwekuyeuka kwemuviri. Kana kubviswa kana kugadziriswa kusingaiti, saka kurasikirwa kwacho zvachose.
Ndangariro dzinochengetwa kwete nechero chikamu chemuviri wepanyama, kana nechisimba chemuviri zvachose. Mirayiro minomwe yekurangarira: kuona-ndangariro, kurira-ndangariro, kuravira-kurangarira, kunhuhwirira-ndangariro, kubata kana kunzwa-kuyeuka, tsika-ndangariro, "ini" kana kuzivikanwa-ndangariro-inotaurwa mu "Nguva ne Shamwari," muNovember, 1915, nyaya-Vaka chiitiko-chiitiko chose uye icho pano chinonzi hunhu-kurangarira. Imwe yeimwe yefungwa-ndangariro uye zvese zvinomwe ndangariro zvakabatanidzwa uye kushanda pamwe zvinoumba hunhu-ndangariro. Kuyeuka hunhu kune mativi maviri kana zvinhu: iro remuviri nerutivi rwepfungwa. Rutivi rwepanyama rwehunhu-ndangariro hune chekuita nemuviri wenyama uye neyepanyama nyama, asi kunzwa nekuyeuka kweizvi zviri mundangariro dzemweya uye kwete mumuviri wenyama kana mune nhengo dzepfungwa. Hunhu-ndangariro hunotanga apo iyo yemunhu, munhu wenyama, anokwanisa kugadzirisa nekurongedza maviri kana anopfuura emanzwiro ayo nekwavo chaiko-nhengo nhengo dzayo yemuviri uye kutarisa izvi kune chimwe chinhu chemuviri. Ehezve, pfungwa ya "Ini" inofanira kunge iri imwe yemanzwi akarongwa uye akatariswa pamwe chete kana mamwe manzwi akatarisana uye achishanda kuburikidza neaya mitezo mimwe pfungwa. Ndangariro yekutanga iyo munhu anayo yekuvapo kwake mune zvepanyama panyama ndipo paanoziva "ini" hunhu hwake paakamutswa uye akabatanidzwa pamwe neake kana imwe yemamwe manzwiro, apo ivo vaive vakatarisa pane chimwe chinhu chemuviri kana chaiitika. Mucheche kana mucheche anoona zvinhu uye nekunzwa mheremhere pamberi pechirevo che "Ini" anomuka otungamirwa nekuona nekunzwa. Pakati peiyo nguva inongova mhuka. Kwete kusvikira mucheche ave kugona kufunga kana kunzwa kana kuti "ini" maererano nekuona kana kunzwa kana chimwe chinzwa, ko kuvapo kwemunhu kana hunhu-ndangariro hunotanga. Rutivi rwenyama rwehunhu-ndangariro runopera pamwe nekufa kwemuviri wemuviri, panguva iyo nhengo yemunhu nehunhu hwayo inobvisa kubva kune ganda rayo, muviri wenyama, uye ndokuveurwa kubva kunhengo nenhengo dzedzinza.
Rutivi rwemweya rwehunhu-ndangariro dzinofanira kutanga kuitika pamwe kana kumberi kwekutanga kweunhu-kurangarira. Ipapo pfungwa ya "ini" yaizomuka ichizvibatanidza seya fomu neyeye kana imwe yemanzwiro epfungwa, senge clairvoyance kana clairaudience, uye izvi zvingave zvinobatana uye zvakabatana nemitezo yemuviri yepfungwa kuti nyika yepamoyo. uye iyo yepanyama yaizogadziriswa uye inoenderana neyemuviri wenyama nemitezo yayo. Asi uku kugadziriswa kwe psychic neparutivi rwepanyama hwehunhu-ndangariro hahuna kugadzirwa, uye pfungwa dzemweya hadziwanzo kuvhurwa dzakasununguka mumunhu. Iwo mafungiro epfungwa-ndangariro anowanzo hukama ne nhengo dzemuviri uye zvinhu zvepanyama zvekuti munhu kazhinji haagone kusiyanisa kana kuve nekuyeuka kwekuvapo kunze kwemuviri wake.
Kana iyo psychic side yehunhu-ndangariro yakatendeukira kuzvinhu zvemuviri, hunhu hwepfungwa huchapera munguva pfupi mushure mekufa kwemuviri wenyama, uye hupenyu uye zviitiko zvehunhu zvichapera uye kudzima. Chiitiko chakadai chichaita seisina kana bhara kana banga rakagadzirwa pane pfungwa rakabatana nehunhu ihwohwo. Kana pfungwa dzatendeukira kuzvinhu zvakanaka zvekufunga, sekuvandudzwa kwevanhu, dzidzo nekuvandudza kwemanzwiro nekuzvibata zvine musoro wenyaya, kana mimhanzi, kana kupenda, kana kupenda, kana kuvezwa kwakanaka kwehunyanzvi. , ipapo pfungwa dzinozvisimbisa pachavo pakuringana kwepfungwa, uye pfungwa dzinotakura, kupfuura rufu, kurangarira izvo zvakanaka zvekunzwa zvekunzwa zvakashamiswa pazviri. Hunhu hwakavhunika mushure mekufa, uye ndidzo ndidzo dzehunhu dzakabatana nezvinhu zvemuviri uye zvinhu muhupenyu ihwohwo zvinoputswa nekumuka kwemanzwiro ayo akaita hunhu uhu. Iko, zvisinei, pfungwa dzehunhu hwehunhu hwacho dzaive nehanya nenyaya dzakanaka dzakabatana nepfungwa, ipapo pfungwa dzinotakura pamwe chete nezvayo. Kana iyo pfungwa yakavakira iyo hunhu hutsva hunoumbwa nehunhu hwayo hutsva, ndangariro dzehunhu hwekare dzakatakurwa nepfungwa sekufungidzira, zvichazokonzeresa pfungwa uye nekubatsira kukura kwavo pamwe chete nezvimwe zvidzidzo zvavakave nazvo zvakapfuura zvine hanya.
Kurasikirwa kwekuyeuka kwehupenyu hwapfuura uye hupenyu hwepamberi hunokonzerwa nekurasikirwa kwekupedzisira uye kwekutanga hunhu. Sezvo vanhu vasina imwe ndangariro kupfuura iwo manomwe maira ehunhu-ndangariro, murume haagoni kuzviziva kana kuzvirangarira iye amene kubva pachezvahwo hunhu hwake, kana kunze kwezvinhu zvakabatana nehuhu hunhu. Iye anokanganwa ndangariro yehupenyu hwapfuura nekuti manzwiro ehumwe hunhu anoparadzaniswa uye akaputswa nerufu, uye hapana chimwe chinhu chakasara kubereka sekufunga-ndangariro muhupenyu hunotevera, zvinhu izvo nehunhu ihwohwo hwaive nebasa.
Chikamu kana kurasikirwa kwakazara kwekuyeuka kwezvinhu zvakabatana neupenyu huno nekuda kwekukanganiswa kana kurasikirwa zvachose kwechombo icho iro ndangariro rinoshanda, kana kukuvara kana kurasikirwa kwezvinhu zvepanyama izvo zvinoburitsa ndangariro. Iko kurasikirwa kwekuona kana kunzwa kunogona kunge kuri nekuda kwechikonzero chemuviri, sekukuvara kunoitwa ziso kana nzeve. Asi kana icho chinonzi chinonzi kuona kana icho chinonzi chichigwinyika chikaramba chisina kugadziriswa, uye kukuvara kuchinhu chacho kuchigadziriswa, ipapo kuona nekunzwa zvichadzorerwa. Asi kana izvi zvisikwa zvakakuvara pachako, ipapo hakungavi nekurasikirwa kwekuona chete kana kunzwa, zvakaenzana nekukuvara, asi zvisikwa izvi zvaitadza kubereka sekurangarira zviono nemanzwi avakange vajaira.
Iko kurasikirwa kwekuyeuka, kana kusiri nekuda kwezvikonzero zvemuviri, kunogadzirwa nekushungurudzwa kwemanzwiro kana nekusakwanisa kudzora nedzidzo yemanzwiro, kana nekusvava kwezvinhu zvepfungwa, zvichikonzera kukwegura, kana nekufunga kwepfungwa. une hanya nezvidzidzo zvekufunga usingatarise mamiriro azvino.
Iko kuzara kwekuzvibata kwebonde kunozvikuvadza pane iyo inonzi iko kuona; uye huwandu hwekukuvara hunotsigirwa hunongedza huwandu hwekurasikirwa zvishoma kana kurasikirwa zvachose kwekuona-ndangariro. Kusarangarira mashandisirwo emazwi uye hukama hweMazwi kunodzivirira kukura nekusimudzira kweanozivikanwa seinzwi-revo uye kunoita kuti itadze kubereka seanorira-ndangariro kutinhira kwayakanga yagamuchira. Kushungurudzwa kwemukanwa kana kusava nehanya nekukudziridza palate, kunodzora iko kunonzi kuravira uye kunoita kuti atadze kusiyanisa pakati pezvakakora uye kubereka kuravira-kurangarira. Mukanwa munoshungurudzwa doro uye zvimwe zvinomutsa zvinyoro-nyoro, uye nekuwandisa kudya zvisina hanya neizvo kunaka kwekunakirwa mukudya. Kupererwa kwepfungwa-ndangariro dzinogona kukonzerwa nekusagadzikana kwezviito zvekuona uye kurira uye nekunzwa kwekuravira, nekuwora dumbu uye matumbo aine zvakawanda kupfuura zvavangagaya, kana nekuisa mavari zvavasingakwanise kugaya. Izvo zvinonzi kunhuhwirira kuri muhunhu chinhu chinoumbika, chisimba chakapatsanurwa kuve chinhu chebonde. Kukanganisa kwekuita, kuchikuvadza kune mamwe manzwi, kunogona kushungurudza uye kukanda kunze kwekutarisa kunhuhwirira-pfungwa, kana kuideredza uye kuita kuti itadze kunyoresa kana kubereka emanations hunhu hwechinhu; uye, kudzimbira kana kudya zvisina kukodzera kunogona kudzikira kana kusangana uye kukonzeresa kurasikirwa kwekunhuhwirira kwendangariro.
Izvi ndizvo zvinokonzeresa kurasikirwa kweiyo chaiyo pfungwa-ndangariro. Kune zvinokanganisika zvekuyeuka izvo zvisiri chaizvo kurasikirwa kwendangariro, kunyange kazhinji kazhinji zvichidanwa kudaro. Munhu anoenda kunotenga zvimwe zvinyorwa, asi kana asvika muchitoro haakwanisi kuyeuka zvaakange atenga. Mumwe munhu haagoni kurangarira zvikamu zvemharidzo, kana kuti chaaizoitei, kana zvaari kutsvaga, kana kwaanenge achiisa zvinhu. Chimwe chinokanganwa mazita evanhu, nzvimbo, kana zvinhu. Vamwe vanokanganwa huwandu huri padzimba kana mumigwagwa mavanogara. Vamwe havakwanisi kurangarira izvo zvavakataura kana kuita nezuro kana vhiki rapfuura, kunyangwe ivo vachikwanisa kurondedzera nezvakaitika zvakaitika vachiri vadiki. Kazhinji kukanganisa kwakadaro kwekuyeuka zviratidzo zvekudzora kana kupera kwemanzwiro nekukwegura; asi kunyange kufambira mberi kwakadaro kwekukwegura kunokonzerwa nekusakwanisa kudzora kwemanzwi nekutonga kwepfungwa, uye nekusave nekudzidzira manzwiro kuve vashumiri vechokwadi kupfungwa. "Kurangarira kwakashata," kukanganwa, "" kusavapo kwepfungwa, "zvikonzero zvekutadza kweumwe kudzora pfungwa zvekuti pfungwa dzinogona kudzora pfungwa. Zvimwe zvinokonzeresa kukanganisika kwendangariro ibhizinesi, mafaro, uye zvimisikidzo, izvo zvinobata pfungwa uye zvinotenderwa kudzurudza kana kupedzisa izvo zvanga zvoda kuita. Zvekare, kana pfungwa dzakabatanidzwa nezvinyorwa zvekufunga zvisingaenderane nemamiriro ezvinhu epano kana nemanzwiro, pfungwa dzinodzungaira kune izvo zvadzo zvinhu, apo pfungwa dzinozvibatanidza pachako. Ipapo kunotevera kusavapo-kufunga, kukanganwa.
Kukundikana kuyeuka kwakakodzera kunyanya kusapa iko kunodiwa kune izvo izvo zvinoda kurangarirwa, uye kusazviita kuti zvive zvakajeka, uye kusabhadhara nechisimba kwakaringana iro ratidziro rinofanira kurangarirwa.
Chii chinoita kuti munhu akanganwe zita rake kana kuti anogara kupi, kunyange chiyeuchidzo chake chisingakanganisi mune zvimwe zvinhu?
Iko kusarangarira kwezita rako uye kwaunogara mumwe, kuri kukanda "ini" pfungwa nekuona uye nemanzwi einzwi ekubata kana kunze kwekutarisa. Kana pfungwa ya "ini" ikadzimwa kana kudimburwa kubva kune imwe pfungwa muhunhu-ndangariro, uye dzimwe pfungwa dzakabatana zvine hukama, hunhu huchaita pasina kuzivikanwa-ndiko kuti, kunze kwekunge husiri kucherechedzwa kana kubatwa nahwo chimwewo chinhu. Iye ane chiitiko chakadai anokwanisa kuziva nzvimbo uye kutaura nezvezvinhu zvakajairwa izvo zvaisada kuzivikanwa zvine hukama naye. Asi aigona kunzwa asina chinhu, akashama, araswa, sekunge ari kutsvaga chimwe chinhu chaaiziva uye chaakanganwa. Mukubatana uku mumwe haazove nemanzwiro ekuita mutoro. Aizozviita, asi kwete kubva mupfungwa yebasa. Aizodya kana aine nzara, amwe kana aine nyota, uye orara kana apera simba, zvakati fananei nemhuka, kana achimanikidzwa nehunhu hwepanyama. Aya mamiriro anogona kukonzerwa nekuvhara kweuropi, mune imwe yemukati memukati memukati, kana kukanganisa kwe pituitary muviri. Kana zvirizvo, pfungwa ya "Ini" yaizodzoreredzwa kana chipinganidzo chabviswa. Ipapo pfungwa ya "ini" yaizobatika zvakare kubata nekutarisa nemamwe manzwi, uye munhu iyeye angangorangarira zita rake, nekuziva kwaanogara uye kumba kwake.